Yini i-hydrometeor futhi yiziphi izinhlobo eziyinhloko? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wake wazibuza ukuthi iyini i-hydrometeor? Lapha unempendulo: le nto iqoqo lezinhlayiya ezinamanzi, eziwuketshezi noma eziqinile eziwela emkhathini. Lezi zinhlayiya zingahlala zimisiwe, zibekwe ezintweni ezisemkhathini wamahhala, noma ziwe emkhathini zize zifinyelele ebusweni bomhlaba.
Phakathi kokusemqoka sigqamisa imvula, inkungu, inkungu noma isithwathwa. Masazi izinhlobo eziyinhloko ukuthi zikhona nokuthi zibonakala kanjani.
Ama-Hydrometeors amiswe emoyeni
Yilezo ezakhiwa yizinhlayiya ezincane kakhulu zamanzi noma zeqhwa ezimiswe emoyeni.
Inkungu: yakhiwe ngamaconsi amancane kakhulu wamanzi angabonakala ngeso lenyama. Lawa maconsi anciphisa ukubonakala okuvundlile kube ngaphansi kwe-1km. Inkungu ingaba buthakathaka uma ibukwa ebangeni eliphakathi kuka-500 no-1000m, ilinganiselwe uma ibanga liphakathi kuka-50 no-500m, futhi liminyene lapho ukubonakala kungaphansi kwama-50m.
Inkungu: Njengenkungu, yakhiwa ngamaconsi amanzi amancane kakhulu, kodwa kulokhu ayingcosana. Yehlisa ukubonakala phakathi kwe-1 ne-10km nomswakama ohlobene no-80%.
Ama-Hydrometeors abekwe ezintweni ezisemkhathini
Zenzeka lapho umhwamuko osemoyeni ujiya ezintweni ezisemhlabathini.
Isithwathwa: Kwenzeka lapho amakristalu e-ice efakwa ezintweni, ngamazinga okushisa asondele kakhulu ku-0 degrees.
Isithwathwa: Lapho umswakama wenhlabathi ubanda, ungqimba olushelelayo kakhulu lwamaqhwa lwakha, okuyilapho sithi kube khona isithwathwa.
Inkungu ebandayo: Kwenzeka ezindaweni lapho kunenkungu nomoya ovunguza kancane. Amaconsi amanzi aba yiqhwa lapho ehlangana nomhlabathi.
Ama-Hydrometeors awela emkhathini
Yilokho esikwaziyo ngegama lemvula. Ziyizinhlayiya eziwuketshezi noma eziqinile eziwa emafini.
Imvula: Ziyizinhlayiya zamanzi ezinobubanzi obungaphezu kwamamilimitha ayi-0,5.
I-Nevada: Yakhiwa amakristalu eqhwa awela emafwini emvula.
Isichotho Le mvula yakhiwa izinhlayiya zeqhwa ezinobubanzi obuphakathi kwamamilimitha ayisi-5 kuya kwangama-50.
Kube nesithakazelo kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yini i-hydrometeor futhi yiziphi izinhlobo eziyinhloko?
Ukubaluleka kwamafu ekushintsheni kwesimo sezulu